Zaza very tao Vavatenina Tafaverina rehefa nanaraka arabe
Ny 12 jona teo no nisy fitarainana zaza miisa roa very voarain’ny polisy tao Vavatenina. Araka ny fanazavanan’ny lehiben’ny kaomisarian’ny polisy nasionaly ao an-toerana, André Rakotoarison, dia efa tafaverina ao an-tokantranony ireo zaza ankehitriny rehefa nanaraka arabe.
Nisy tsy fahasalamana ara-tsaina ny iray, hoy ny ray aman-dreniny, ary raha tokony ho nianatra dia nivily lalan-kafa. Miisa 5 na 6 isan’andro, raha ny loharanom-baovao iray no fitarainana mahakasika zaza very voarain’ireo tompon’andraikitra eto Madagasikara ary niteraka savorovoro sy fiahiahiana ho an’ny mpanara-baovao tato ho ato. Ho an’ity distrika iray ity dia nanazava ny lehiben’ny mpitandro filaminana ao an-toerana fa misy ny tsy fandriampahalemana saingy milamina kosa amin’ny ankapobeny ny toe-draharaha, raha mitaha amin’ny distrika hafa. Eo ny fisavana alina ataon’ny mpitandro filaminana ary eo koa ny barazy ekonomika izay tena misoroka ny trafikana lavanila ao an-toerana.